Wasiirka Amniga iyo Maamulka Gobolka oo ka wada hadlay xoojinta Nabadgelyada Muqdisho -
You are here: Home / Wararka / Wasiirka Amniga iyo Maamulka Gobolka oo ka wada hadlay xoojinta Nabadgelyada Muqdisho
Previous: Ciidamo talyaani ah oo Muqdisho Qarax Lagu la eegtay Maanta
Next: Sidee ayuu Mukhtaar ROOBOW uga badbaaday qaraxii lala damacsanaa?
Xaggay ka shidaal qaadanaysaa kooxda Liverpool? Apr 22, 2019
Tababaraha kooxda Liverpool Jurgen Klopp ayaa sheegay in shidaalka ay kooxdiisu ku shaqayso aysan ahayn hiigsashada koob la qaado balse taas baddalkeeda ay tahay dhiirigalinta ay ka helaan taageerayaasha.
Messi diyaar ma u yahay inuu qaato taajkii Cristiano Ronaldo ee Champions League-ga? Apr 17, 2019
Dadka falanqeeya arrimaha ciyaaraha kubadda cagta ayaa la kala safan Ronaldo iyo Messi
Isku aadka Koobka Qaramada Afrika oo la sameeyay Apr 12, 2019
Masar oo martigalinaysa Koobka Qaramada Afrika 2019 waxa ay ka hortagaysaa DR Congo, Uganda iyo Zimbabwe oo ay ku wada jiraan Group A.